कसले सुन्ने एसिड छ्यापिएका किशोरीको रोदन ? – Chetananews.com
कसले सुन्ने एसिड छ्यापिएका किशोरीको रोदन ?
२ आश्विन २०७५, मंगलवार ०८:१८ 82 पटक हेरिएको
काठमाडाैं – रातको १२ बजे एक्कासी आमा, ढोका खोल भन्ने आवाज आयो। ३ महिने शिशु लिएर सुतिरहेकी पर्शिला दास भर्खर निदाएकी थिइन। उठेर हतार हतार छोरीहरु सुतेको कोठामा पुगिन।
दुवै छोरीहरु ढोका छेउमा ‘पोल्यो, आत्था आत्था’ भन्दै छट्पटाई रहेका थिए। आमा पुग्ना साथ दुवै छोरीले आमालाई अँगालो हालेर रुन थाले। अत्तालिएकी आमा पनि रुँदै चिच्याइन। हल्ला खल्ला सुनेर मध्यरातमा गाउँले भेला भए, अनि बल्ल थाहा भयो दुई दिदीबहिनीको शरीरमा त तेजाब छ्यापिएको रहेछ। गाउँलेले नै पानीले एसिड पखालिदिए। नजिकैको कलमा नुहाइदिए तर जलन कम भएन।
पर्शिलाका श्रीमान् जादवलाल दास करिब ७ मिनेट पर चन्द्रनिगाहपुरमा पुल हाउस सञ्चालन गर्छन। भोलिपल्ट हरितालिका तीजको ब्रत थियो। साँझ जेठी छोरी सम्झनाले नै बनाएको खाना खाएर सबैजना सुतेका थिए। बाबु जादवलाल भने करिब एक महिना यता सुरु गरेको पुल हाउसमै सुत्छन, त्यस साँझ उनले १२ वर्षको छोरो पनि सँगै लिएर गएका थिए।
पर्शिला दासको ढेड बर्ष अघि मात्रै जादवलाल दाससँग बिवाह भएको हो। जादवलालका ४ सन्तान छन्। दुई वर्षअघि सम्बन्ध विच्छेद गरेकी जेठी श्रीमतीतर्फ दुई छोरी र एक छोरा अनि कान्छी पर्शिलातर्फ एक छोरी छन्। पर्शिलाले सौताका सन्तान नठानिकन सबैलाई समान लालनपालन गर्दै आएकी छिन्। पर्शिलाकै रेखदेखमा जादवलालको परिवार सम्हालिएको छ।
त्यस रात गाउँले आएपछि उनले पति जादवलाललाई फोन गरिन, करिब पाँच मिनेटमा बाबु छोरा दगुर्दै आइपुगे। पर्शिलाले दुवै छोरीको कपडा फेरिदिइन्। जेठी सम्झनाको त कपडा सबै डढिसकेको थियो। दुवै छोरीलाई सुतीको सल लगाइदिइन्।
पति जादवलालले चन्द्रनिगाहपुरमा एम्बुलेन्सका लागि फोन गरे। तर दुर्भाग्य, त्यस दिन तीनवटै एम्बुलेन्स व्यस्त थिए। छोरीहरुलाई समयमै अस्पताल नपु¥याए स्थिती जटिल बन्ने बुझेर उनले छिमेकी घरबाट स्कुटर लिएर आए।
एउटै स्कुटरमा बाबु, कान्छी छोरी सुस्मिता, जेठी सम्झना र दुई दिदीलाई थाम्न १२ बर्षीय भाइ पछाडि बसे। करिब १ बजे उनीहरु चन्द्रनिगाहपुरको अस्पताल पुगे तर त्यहाँ उपचार सम्भव भएन।
पर्शिला काखे नानी च्यापेर केही समयपछि अस्पताल आइपुगिन। अस्पतालमा उनी आफैँ दुई पटक ढलिन। जेठी छोरी सम्झना पीडा खप्न नसकेर पोल्यो पोल्यो मात्र भनिरहेकी थिइन्, बहिनी सुस्मिता भने कहिले दिदी त कहिले कान्छी आमा पुकार्दै चिच्याई रहेकी थिइन।
त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि त्यसै रात विहानको करिब तीन बजे दुई छोरीलाई बाबु र छिमेकीले काठमाडौं लिएर आए। बाबु जादवलाललाई छोरीहरुको उपचार कहाँ गर्ने केही अत्तो थिएन। तर गाउँले एकजना दाईले फोनमा कीर्तिपुर अस्पताल लैजान सुझाएपछि बुधबार बिहान करिब दश बजे अस्पताल आइपुगे।
उपचारका लागि श्रीमान् र छोरीहरु काठमाडौं लागेपछि पर्शिला भने दुई सन्तान लिएर घर फर्किइन। उनी बाँकी समय निदाउन सकिनन् न त अर्को दिन दिनभर केही खान सकिन्। गाउँमा अरु महिला तीजको ब्रतले खाली पेट बसिरहँदा पर्शिला भने छोरीहरुको पीडा सम्झेर भोकै बसिन।
अहिले पर्शिला पनि काठमाडौं आइपुगेकी छिन। तर पीडा घटेको छैन्। आइसियुमा रहेका छोरीहरुको अवस्था देख्दै अहिले पनि उनलाई भक्कानो छुटेर आउँछ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा विष्णु लामिछाने र दिपेन्द्र रोक्काले लेखेका छन्।
कान्छी छोरी सुस्मिताको अवस्था सामान्य बन्दै गएपनि जेठी सम्झनाको अवस्था गम्भीर छ। उपचारमा रहेका डा.सुरेन्द्र बस्नेतका अनुसार दिदीको शरीरमा करिब ४० प्रतिशत एसिडको जलन भएकाले निकै जटिल रहेको छ भने बहिनीको भने ४ प्रतिशत मात्रै भएकाले सुधारोन्मुख रहेको छ।
उनले भने, ‘एसिडको असर कति हुन्छ भन्ने कुरा एसिडको मात्रा सँगै त्यो शरीरमा कति भित्रसम्म प्रवेश गरेको छ भन्नेमा भर पर्छ, सम्झनाको शरीरको ३५ प्रतिशत भन्दा बढी भाग नराम्ररी बिग्रेको छ।’